သူငယ်ချင်းစုံတွဲ – Grab Love Story
ချယ်ရီတယောက် မိဘသဘောမတူတဲ့ သူနဲ့ လင်နောက်လိုက်ခဲ့တာဖြစ်။ ချယ်ရီ့ကောင်လေးဘက်ကလဲ ချယ်ရီနဲ့သဘောမတူ။ ချယ်ရီ့ဘက်လဲ သဘောမတူတော့ နှစ်ဦးသဘောတူ ခိုးပြေးကြတယ်။ ကောင်လေးက နယ်က။ ချယ်ရီနဲ့ခိုးပြေးတော့ ပါလာတဲ့ ငွေလေးနဲ့လက်ဝတ်လက်စားလေးတွေ ထုခွဲရောင်းချပြီး၊ ဒီဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်ထဲကမှာ တိုက်ခန်းလေးငှါးနေကြတယ်။ နေရင်းနဲ့ ခြောက်လလောက်ကြာတော့ ရပ်ကွက်ထဲက ရပ်ကွက်ခံတချို့နဲ့လဲ မျက်မှန်းတန်းမိလာတယ်။ ပါလာတဲ့ငွေလဲ ထိုင်စားလို့ သိပ်မကျန်တော့ဘူး။ ဒါနဲ့ ရပ်ကွက်ထဲမှာ ဆိုင်ကယ် ဝယ်ရောင်းလေးလုပ်မယ် ဆိုပြီး၊ ကျန်တဲ့ ငွေလေးနဲ့ ဆိုင်ကယ်လေးတစ်စီးဝယ်ပြီး ဝယ်ရောင်းစလုပ်တယ်။ အဆင်ပြေတယ်။ ဆိုင်ကယ် တစ်စီးကနေနှစ်စီးဖြစ်လာတယ်။ နှစ်စီးကနေ သုံးစီး ဖြစ်လာတယ်။ စီးပွားဖြစ်လာတယ်။ ဒီမှာတင် ချယ်ရီယောကျားက သူ့နယ်မှာ ဆိုင်ကယ်တွေ ပေါတယ်။ နယ်အထိဆင်းဝယ်ပြီး ဒီမှာ ပြန်ရောင်းရင် အဆင်ပြေမယ်လို့ တွေးမိပြီး၊ နယ်ကိုဆင်းပြီး ဆိုင်ကယ်တွေ သယ်တော့တယ်။ အရောင်းအဝယ်ကလဲ ကောင်းလာတော့ တစ်လ သသုံးခါလောက် နယ်ပြန်ဆင်းနေရတယ်။
အခု သင်းစင်းတို့လင်မယားနဲ့ ဆုံတဲ့အချိန်က ချယ်ရီ့ယောက်ျား နယ်ပြန်ဆင်းသွားတဲ့အချိန်။
“ငါ့အကြောင်းကတော့အဲဒါပဲ သူငယ်ချင်းရေ။ အခု ငါ့ယောက်ျားက သူ့နယ်ခဏပြန်သွားတယ်။ ဆိုင်ကယ်တွေသွားဝယ်တာပေါ့ဟယ်၊ ငါတို့နေတာက နင်တို့နောက်လမ်းတင်၊ ငါလဲ တယောက်ထဲ ပျင်းနေတာ နင့်တွေ့လိုက်တော့ ပျော်လိုက်တာ သင်းရယ်”
“နင်အခု အိမ်မှာတယောက်ထဲပေါ့ ၊ အဲဒါဆို မပြန်နဲ့ဟာ မတွေ့ရတာလဲကြာပြီ၊ ငါတို့ အတူချက်စားကြမယ်၊ ပြီးတော့ အရင်လို မြွေလှေကား ကစားကြမယ်လေဟာ၊ ညကျရင် စကားတွေတဝကြီးပြောကြရအောင်၊ နင်ခုညမပြန်နဲ့ ငါတို့အိမ်မှာပဲအိပ်ဟာ”
“အေးပါဟာ ငါအိမ်ခဏပြန်ပြီး ရေချိုးအဝတ်စားလဲလိုက်ဦးမယ်။ ဒါပေမဲ့ ငါလိုက်အိပ်လို့ နင်တို့လင်မယား အဆင်ပြေပါ့မလား၊ ညားခါစဆိုတော့ ဟိဟိ”
“အမလေး ဘာမှမဖြစ်ဘူး၊ ဟုတ်တယ်နော် ကို”
မိန်းမဖြစ်သူ သင်းသင်းစကားကြောင့် အမ်မာ စိတ်ညစ်သွားတယ်။
ညားခါစမို့ သင်းသင်တို့လင်မယားက နေ့ရောညပါ မပြတ်လိုးနေကြတာ။ ညကျရင် အမုန်းထပ်ဆွဲမယ်လို့ စဉ်းစားထားတဲ့ အမ်မာ တယောက် ဧည့်သည်လာအိပ်မယ်ဆိုတော့ မအီမလည်ကြီး ဖြစ်နေတယ်။ အိမ်မှာ အခန်းကလဲဖွဲ့ထားတာမဟုတ်။
” ကို ဘာတွေစဉ်းစားနေတာလဲ …. သင်းပြောတာ မကြားဘူးလား”
” အမ် ကြားပါတယ် ဘာမှ မစဉ်းစားပါဘူး”
သို့ဖြင့် ထိုညက ချယ်ရီ သင်းသင်းတို့အခန်းမှာ လိုက်အိပ်ဖြစ်တယ်။
မတွေ့ကြတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ သင်းသင်းနဲ့ ချယ်ရီတို့ အမှတ်မထင်ပြန်ဆုံကြရင်း ၊ ယောက်ျားက နယ်ခဏပြန်သွားလို့ အိမ်မှာတယောက်ထဲ ဖြစ်နေတဲ့ ချယ်ရီက သင်းသင်းတို့အိမ်လိုက်လည်ရင်း၊ အဲဒီည အဲဒီမှာပဲ ညအိပ်ဖြစ်သွားတယ်။
စားစရာသောက်စရာတွေ ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ကြပြီး ညနေကျတော့ သင်းသင်းယောက်ျား အမ်မာက အရက်ပုလင်းထောင်၊၊ သင်းသင်းနဲ့ချယ်ရီတို့က ဘီယာသောက်ကြတယ်။ စားကြသောက်ကြရင်း ပြောကြဆိုကြရင်း ချယ်ရီနဲ့ သင်းသင်းရဲ့ယောက်ျားလဲ ပိုပြီး ရင်းနှီးမှုရလာတယ်။
ချယ်ရီက အရပ်မနိပ်မမြင့်၊ ရင်သားတွေက ပြားကပ်ကပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ သူမရဲ့ ဖင်ကတော့ ကိတ်တယ်။ ဖုထစ်ဝိုင်းစက်နေတယ်။ ဒါကို သင်းစင်းယောက်ျား အမ်မာက တချက်တချက်ခိုးခိုးကြည့်တယ်။ ခိုးကြည့်တာကိုသိတာက သင်းသင်း၊ သူမယောက်ျားအကြောင်းလဲသူမသိတယ်။ ကိုအမ်မာက ဖင်ကြီးရင်ကြိုက်တယ် ဆိုတာ။
သင်းသင်းရဲ့ ဖင်ကတော့ သိပ်မကြီးဘူး သာမာန်ပဲ။ ဒါပေမဲ့ သင်းသင်းမှာ ထူးခြားတာက သူမရဲ့နို့တွေ။ သူမရဲ့နို့တွေက ကြီးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပျော့တွဲမနေဘူး။ တင်းတင်းရင်းရင်းနဲ့ လှတယ်။ ပြီးတော့ သင်းသင်းရဲ့နိူ့က ပါရမီကြောင့်လားမသိဘူး။ အတွေ့ကောင်းတယ် ကိုင်လိုက်တာနဲ့ နို့ရဲ့အထိအတွေ့နဲ့တင် အမ်မာ့ကို လီးတောင်စေတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ ဖင်ကြီးတာကြိုက်ပေမဲ့ ဖင်သိပ်မကြီးတဲ့ သင်းသင်းကို နို့အထိအတွေ့နဲ့ပဲ အမ်မာတယောက်အစွဲကြီးစွဲခဲ့တာ။ ထားပါတော့။ သူတို့သုံးယောက် သောက်ရင်းစားရင်းနဲ့ အတော်လေးခရီးရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ အမ်မာကတော့ ဖြေးဖြေပဲသောက်နေတော့ သိပ်မမူးပေမဲ့ သင်းသင်းတို့ နှစ်ယောက်ကတော့ အတော်မူးလာကြပြီ။ ဒီမှာ စဖောက်တာက သင်းသင်း…..။
“ချယ်ရီရေ ငါ့ ကိုကိုကတော့ မျက်မှန်တပ်ရတော့မယ်ထင်တယ်”
နဲနဲမူးလာတော့ အာသွက်လျှာသွက်လေးတွေဖြစ်လာကြတယ်။ သင်းသင်းစကားကြောင့် အမ်မာနဲ့ချယ်ရီလဲ အံသြသွားကြတယ်။ စကားအဆက်အစပ်မရှိ ထပြောတာကိုး။
“ဘာပြောလဲ သင်းရယ်…. ကိုက ဘာလို့ မျက်မှန်တပ်ရမှာလဲ..”
“သြော်…ချယ်ရီ့ဖင်ကို ခိုးခိုးကြည့်နေရတာနဲ့ပဲ ကြာရင် ငါ့ကိုကို မျက်စိတွေအားနည်းပြီး မျက်မှန်တပ်ရတော့မယ်လို့ ဟင်းဟင်း”
သင်းသင်းစကားကြောင့် အမ်မာ မျက်နှာတခုလုံးပူထူသွားတယ်။ ပြီးတော့ ချယ်ရီ့ကိုလဲ အားနာသွားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ချယ်ရီ့ကိုအကဲခတ်ုကည့်တော့ အေးဆေးပဲ။
“အမလေး ကောင်မ ကိုအမ်မာက ငါ့ကို ကြည့်ရင်၊ ငါ့ယောက်ျား နယ်ကပြန်လာတဲ့အခါ နင့်ကိုပြန်ကြည့်မှာ သဘောပေါက်”
“ငါ့ကိုကြည့်စရာလား ငါကနင့်လိုအကိတ်မ မဟုတ်ဘူးဟဲ့”
“အေး နင်က ဖင်မကိတ်ပေမဲ့ ရင်ကိတ်တယ်လေ၊ ငါ့ယောကျာ်းကလဲ နိုးများကြီးရင် လိုက်ငမ်းတာငမ်းတာ မပြောနဲ့…. ခိခိ”
မိန်းကလေးနှစ်ယောက်မူးပြီး ပြောချင်ရာတွေပြောနေကြတော့ အမ်မာအနေရခက်လာတယ်။
“နင်တို့ကလဲ ဘာတွေလျှောက်ပြောနေကြမှန်းကိုမသိဘူး။ သောက်စရာရှိအေးဆေးသောက်၊ တခြားဟာ ပြော…”
“အံမယ်.. ငါ့ကိုကိုက ဘာလဲ ဒါရှက်တာလား၊ ရှက်ချင်ယောင်ဆောင်တာလား…, ဒါပဲနော် ချယ်ရီ့ကို ကိုသွားကြည့်ရင် ချယ်ရီပြောတာ ကြားတယ်မဟုတ်လား သူ့ယောက်ျားလာရင် သင်းကလဲ ပြပလိုက်မှာ…ဟိဟိ”
“ပြစရာမလိုပါဘူး ကောင်မရယ်နင့်နိူ့ကြီးက မို့ထွက်နေတဲ့ဟာ၊
ထင်သာမြင်သာ ရှိပြီးသား ရှိပြီးသား….နော် ကိုအမ်မာ”
“ဟုတ်….အဲ…ဟာ ဒီနှစ်ယောက် ဘာတွေပြောနေကြလဲမသိဘူး”
“ဟီးဟီး သင်းရေ နင့်ယောက်ျားရှက်နေဘီထင်တယ်၊ ငါတို့စတာနဲ့…. အင်း….ငါတွိုင်းလက် သွားဦးမယ်”
ချယ်ရီက ပြောပြောဆိုဆို အိမ်သာသွားဖို့ ထရပ်လိုက်တယ်။ သင်းသင်းက မတ်တပ်ထရပ်လိုက်တဲ့ ချယ်ရီ့ဖင်ကို ဖြန်းကနဲ တချက်ရိုက်လိုက်တယ်။
“ဟဲ့ စောက်ပလုပ်တုတ်….နင်နော် ငါဖင်ကို…”
“ငါ့ကိုကို ကြည့်မယ်ဆိုလဲ ကြည့်ချင်စရာပဲ… ငါ့နို့ကိုသာ နင်က ထင်သာမြင်သာရှိတယ်ပြောနေတယ်… နင့်ဖင်ကြီးကလဲ အရင်ကထက်ကို ပိုထွားလာတာ အယ်နေတာပဲ အသည်းယားလို့ ရိုက်လိုက်တာ ကောင်မရဲ့…”
ချယ်ရီက နောက်ဘက်မှာရှိတဲ့အိမ်သာခန်းဘက်ကို ဖင်ကြီးလှုပ်လီလှုပ်လဲ့နဲ့ လျှောက်သွားတယ်။ အမ်မာလဲ ယောင်ပြီး ချယ်ရီ့အနောက်ပိုင်းကို လိုက်ကြည့်နေမိတယ်။ ဒါကို သင်းသင်းက
“ဟိတ်… တွေ့လား ခုနက သင်းပြောတယမှားလို့လား ခုလဲ ချယ်ရီ့ဖင်နောက်ကို ကို့မျက်လုံးတွေကျွတ်ပါသွားပြီလေ…”
“ဟာကွာ သင်းကလဲ….ချယ်ရီ့ကိုအားနာစရာ… အဲလိုကြီးတွေ လျှောက်ပြောရသလား…. တော်ပီ သင်းတို့အတော်မူးနေပြီ ဒီဘူးကုန်ရင်တော်တော့…. အိပ်ကြမယ်”
“ဒီကောင်မ နဲ့ သင်းနဲ့က ဘာမှ အားနာစရာမလိုဘူး။ ပြီးတော့ ကို့အတွက်ပြောပေးတာပါ။ ကို ချယ်ရီ့ဖင်ကို ကြိုက်နေတယ်မဟူတ်လား မှန်မှန်ပြော…”
သောက်ကြစားကြနဲ သုံးယောက်သား အချိန်ကုန်လာကြတယ်။ ညလဲ နက်လာပြီ ဆိုတော့အိပ်ကြမယ်ပေါ့။ သင်းသင်းတို့အခန်းက အခန်းဖွဲ့မထားဘူး။ ဟောတိုက်။ အ်ိသာရေချိုးခန်းနဲ့ မီးဖိုချောင်ကိုသာ အိမ်ရှေ့အခန်းနဲ့ကန့်ထားတာ။
သင်းသင်းနဲ့မာအမ်တို့လင်မယားက ကုတင်မဝယ်ထားဘူး။ မွေ့ယာထူကြီးတစ်ခုကိုပဲ ကြမ်းပေါ်ချအိပ်ကြတာ။ Air con တပ်ထားတယ်။
ခြင်မကိုက်တော့ ခြင်ထောင်မထောင်ကြဘူး။ လင်မယားနှစ်ထဲမို့ ဒီလိုပဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေခဲ့ကြတာ။ ဧည့်သည်ဆိုတာလဲ သိပ်လာလေ့မရှိဘူးလေ။ ခုမှ ချယ်ရီက ညလာအိပ်တာဆိုတော့…လိုက်ကာတွေဘာတွေလဲ မရှိဘူး။ ဒါနဲ့ပဲ သင်းသင်းတို့လင်မယားအိပ်တဲ့ မွေ့ယာဘေး မလှမ်းမကမ်းမှာပဲ ချယ်ရီအိပ်ဖို့ အခင်းလေးတစ်ခုခင်း…ခေါင်အုံး၊ စောင်တို့ပေးပြီး နေရာစီစဉ်ပေးလိုက်တယ်။ အိပ်ယာဝင်တော့ ညအိပ် မီးလုံးပြာလဲ့လဲလေးပဲ ထွန်းပြီး မီးပိတ်အိပ်ကြတာပေါ့။ အိပ်ယာပေါ်ရောက်တာနဲ့ ဇာတ်လမ်းစတာက သင်းသင်း…။
ပက်လက်လှန်အိပ်နေတဲ့ မာအမ့်ကို ခြေတဖက်နဲ့ ခွလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ မာအမ့် နို့သီးခေါင်းလေးကို လာပွတ်တယ်။ မာအမ်က ယောက်ျား လေးပေမဲ နို့ကိုင်မခံနိုင်ဘူး။ နို့သီးကိုလာပွတ် လာစို့လို့ကတော့ လီးကတောင်လာရော။ လိုးကြရင်လဲသင်းသင်းက မာအမ့်နို့တွေကို စို့ပေး၊ ခြေပေးရင် မာအမ် အရမ်းဖီးလ်တက်တတ်တာမျိုး ဆိုတော့…၊ အခုက ပိုဆိုးတယ်။ ချယ်ရီ့ဖင်ကြီးကြောင့် အစကတည်းက လီးကတောင်ချင်နေတာ ခုလိုမိန်းမက လာဆွတော့ လီးကပေါက်ကွဲမတတ်ပဲ။ သင်း သင်းက မာအမ့်စွတ်ကျယ်အင်္ကျီကို အသာလေးဟပြီး မာအမ့်နို့သီးလေး တဖက်ကို စို့လိုက်တယ်။ လက်တဖက်က နို့သီးတခုကို ခြေပေးနေတယ်။
မာအမ်ဖီးလ်တွေ တက်လာတယ်။ သင်းသင်းက နို့သီးခြေပေးနေတဲ့ လက်ကို အောက်ဘက်ရွေ့လိုက်ပြီး လီးကို ပုဆိုးပေါ်ကနေ အုပ်ကိုင်လိုက်တယ်။
“ဟယ် ဒီနေ့ ကို့လီးကြီးအရမ်းတောင်နေပါလား” …..
သင်းသင်းက တိုးတိုးလေး ပြောရင်း ပုဆိုးကိုဖြေချလိုက်တယ်။
“သင်း… ဘေးမှာ ချယ်ရီရှိနေတယ်လေ…”။…….
မာအမ်က အံကျိတ် သံနဲ့ ပြောတယ်။ သင်းသင်းကမရဘူး။ ဘာမှမပြောတော့ဘဲ ထပြီး မာအမ့် လီးကို ကုန်းစုတ်တော့တယ်။
လည်ပင်းထဲက ညစ်ပြီး ကျိတ်ထွက်လာတဲ့ အသံနဲ့ မာအမ် ညီးတယ်။
တိုးတိုးလေးဆိုပေမဲ့ ဘေးမှာလှဲနေတဲ့ ချယ်ရီ ကြားဖြစ်အောင်ကြားတယ်။ ချယ်ရီက စောင်လေးခြုံပြီး သူတို့လင်မယားကို ကျောပေးအိပ်နေတာ။ မမြင်ရပေမဲ့ အသံကြားရတာနဲ့တင် သင်းသင်တို့လင်မယား ဘာလုပ်နေကြပြီဆိုတာ ချယ်ရီသိတယ်။ ချယ်ရီလဲ ညနေကတည်းက စိတ်တွေထနေတာ။ ယောက်ျားကလဲ ခရီးထွက် ပိုဆိုးတာက သင်းသင်း သူ့ယောက်ျားရှေ့မှာ ပေါ်တင်ကြီး ဖင်ကိုလာရိုက်လိုရိုက်။ သူ့ယောက်ျားက ဖင်လိုက်ကြည့်နဲ့အကြောင်း ပေါ်တင်ကြီးတွေ ပြောလိုပြော၊ မာအမ်ကလဲ ချယ်ရီ့ဖင်ကို တကယ်ပဲ ခိုးခိုးကြည့်နေတာပါ။ ဒါကို ချယ်ရီကလဲ သိတယ်။ ဒီလို စိတ်ထစရာတွေနဲ့ တစ်ညနေလုံးကြုံခဲ့ရပြီး ခုလိုညအိပ်တဲ့အခါ ခုလိုအသံကြားရတော့ ချယ်ရီ့စိတ်တွေ အရမ်းထလာတယ်။ အသာလေး နားစွင့်နေလိုက်တယ်။
တဖက်မှာတော့ သင်းသင်းက မာအမ့်အပေါ်တက်ခွပြီး လိုးနေပြီ။
လီးအဝင်အထွက်သံတွေက အလုံပိတ်တိုက်ခန်းကျဉ်းလေးထဲမှာ ပျံလွင့်နေတယ်။ အသံမထွက်အောင် ကျိတ်လုပ်နေကြပေမဲ့ ၊ ဒီလို လိုးသံတွေကတော့ ထွက်တာပဲ။ တခါတခါ ကျိတ်ပြီးညီးတဲ့အသံတွေ ထွက်ထွက်လာတတ်သေးတာ။
အသက်ရှုသံတွေ၊ ဖိကျိတ်လိုးလို့ လီးနဲ့စောက်ဖုတ်က ထွက်တဲ့အသံတွေ၊ ကျိတ်ပြီးညီးတဲ့အသံတွေက တိုးတယ်ဆိုပေမဲ့ ချယ်ရီတယောက် ကောင်းကောင်းကြားနေရတယ်။ ကြားရလေ စိတ်တွေကထလေ။ ကျောပေးထားလို့မမြင်ရပေမဲ့ အာရုံထဲမှာ သင်းသင်းနဲ့မာအမ်လိုးနေတဲ့ပုံရိပ်တွေက မြင်ယောင်နေတယ်။ အာရုံထဲမြင်ယောင်ရင်း အသံတွေနားစွင့်ရင်း စောင်ခြုံထဲမှာ ကိုယ့်စောက်ဖုတ်ကိုယ်ပွတ်ပြီး ဖီးလ်ယူနေတော့တယ်။
သင်းသင်းတို့ လင်မယား ချယ်ရီ့ကို လှမ်းကြည့်တော့ သူတို့ကိုကျောပေးပြီး စောင်ခြုံထားတယ်။ မီးတွေမှိတ်ထားတယ် ဆိုပေမဲ့ ညအိပ်မီးသီး ပြာလဲလဲ့အရောင်နဲ့က တယောက်ကိုတယောက် မြင်နိုင်ကြတယ်လေ။ ဒီတော့ စောင်ခြုံပြီး တဖက်စောင်းကွေးကွေးလေးအိပ်နေတဲ့ ချယ်ရီမတယောက် တချက်တချက် လှုပ်လှုပ်သွားတာကို မြင်ကြရတယ်။ ချယ်ရီလဲ ဒီဘက်လှည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် သင်းသင်း မြင်းစီးနေတာ ကောင်းကောင်းမြင်ရမှာပါ။
သင်းသင်းအပေါ်က လိုးသမျှ အောက်ကနေ ပင့်ပင့်ခံနေတဲ့ မာအမ်တယောက် ချယ်ရီ့ဘက်ကို လှမ်းကြည့်မိတယ်။ စောင်ပါးလေး ခြုံထားပေမဲ့ ကျောပေးပြီး ကွေးအိပ်နေတော့ ချယ်ရီ့ဖင်ကြီးက မြင်ရတာ လိုးချင်စရား။ တချက်တချက် ချယ်ရီ့ကိုယ်လုံးလေး လှုပ်လှုပ်သွားတာမြင်ရတော့ သင်းသင်း စောက်ဖုတ်ထဲ ဝင်နေတဲ့ လီးက ဆတ်ကနဲ ဆတ်ကနဲကို တောင်လာတာ။ ဒါကို သင်းသင်းကလဲသိတယ်။ ကိုယ်စောက်ဖုတ်ထဲရောက်နေတဲ့လီးပဲ။ လီးရုန်းတဲ့အထိအတွေ့၊ လီးလှုပ်သွားတဲ့အထိအတွေ့ကို သိတာပေါ့။ သူ့ယောက်ျား ချယ်ရီကို ဘေးမှာထားပြီး လိုးနေရတာ ဖီးလ်တွေတအားတက်ပြီး ခုလို လီးက ဆတ်ကနဲဆတ်ကနဲ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို…ဒါကိုပဲ သင်းသင်းက ကြိုက်နေတာ။ လိုးနေရင်း မာတောင်နေတဲ့ လီးကြီးက အဲလို ဆတ်ကနဲ တင်းတင်းသွားတဲ့အရသာက သင်းသင်းစောက်ဖုတ်ထဲ တဆစ်ဆစ်နဲ့ကို ခံလိုကောင်းနေတာ….။ ဒါနဲ့ မာအမ့်ရင်ဘတ်ပေါ် သင်းသင်းမှောက်ချလိုက်ပြီး တိုးတိုးလေး ကပ်ပြောတယ်။
“ကို… ချယ်ရီ့ကိုကြည့်ပြီး လီးက ပိုမာပိုတင်းလာတယ်နော်…”
“သင်းကလဲ မလုပ်နဲ့ လီးကြီးက အဲလိုဖြစ်ဖြစ်သွားတာ သင်းကြိုက်တယ် သိလား…. ဟိုဘက်ကြည့်စမ်း ချယ်ရီ့ဖင်ကြီးကို….”
သင်းသင်းက ပြောရင်း မာအမ့်ခေါင်းကို ချယ်ရီ့ဘက် ဆွဲလှည့်ပေးလိုက်တယ်။ တဆက်ထဲမှာပဲ ခေါင်းငုံပြီး မာအမ့်နို့သီးတွေကို စုတ်ပလိုက်တယ်။ စောက်ဖုတ်ကလဲ မာအမ့်လီးကို ညစ်ညစ်ပလိုက်တယ်။
မာအမ်တယောက် ချယ်ရီ့ဖင်ကြီးကိုလဲကြည့် သင်းသင်းရဲ့ နို့စို့တာနဲ့ စောက်ဖုတ်က ညစ်ပေးတာခံလိုက်တာကြောင့် ပါးစပ်က ညီးသံထွက်သွားတယ်။ လီးကလဲ ဆတ်ကနဲဆတ်ကနဲကို မာတင်းပြီးလှုပ်သွားတယ်။ တချိမ်ထဲမှာပဲ သင်းသင်းလဲ ပြီးသွားတယ်။
“အ၊…..အ…..အင်….အား… ထွက်ပြီ…ထွက်ပြီ… ကို…သင်းပြီးပြီး
“သင်း….ကိုလဲ ပြီးလိုက်တော့မယ်….အ…အ..အား ရှီး…. အင်း”
မာအမ်နဲ့သင်းသင်းတို့ ပြီးသွားလို့ ကျိတ်မနိုင်ခဲမရ အံကျိတ်ပြောလိုက်သံတွေက တိုက်ခန်းထဲ လွင့်ပျံ့သွားတယ်။ အဲဒီမှာ….တစ်ဖက်ကချယ်ရီကလဲ သင်းသင်းတို့အသံနားထောင်ရင်း ကိုယ့်အဖုတ်ကိုယ်ကလိ၊ ကိုယ်စောက်စိကိုယ်ပွတ်နေရင်း….သင်းသင်းတို့ရဲ့ ပြီးတဲ့အသံလဲကြားရော တကိုယ်လုံး ကြက်သီးတွေထပြီး…ပြီးလုပြီးခင်ထိဖြစ်သွားတယ်။
သင်းသင်းက မာအမ့်နဖူးလေးကိုနမ်းပြီး ထလိုက်တယ်။ မာအမ့်လီးကို အနားက အောက်ပိုင်းသုတ်တဲ့ သဘက်တခုနဲ့သုတ်ပေးပြီး သူ့စောက်ဖုတ်ကိုလဲ သုတ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ထမီရင်လျားပြီး ထရပ်လိုက် တယ်။ မာအမ်လဲ ပုဆိုးပြန်ဝတ်ပြီး ထလိုက်တယ်။ သူတို့နှစ်ယောက် ချယ်ရီ့ကို တချက်ကြည့်လိုက်ကြတယ်။ ချယ်ရီက တုတ်တုတ်မှ မလှုပ်ဘူး။ သင်းသင်းနဲ့ မာအမ်တို့ တယောက်ကို တယောက်ပုခုံးတွန့်ပြလိုက်ကြပြီး နောက်ဖေးမီးဖိုခန်းဘက်ထွက်လာလိုက်ကြတယ်။
သင်းသင်းတို့လင်မယား နောက်ခန်းဘက် ထွက်သွားကြပြီး ရေအိမ်ထဲက ရေလောင်းဆေးကြောတဲ့အသံတွေကြားမှ ချယ်ရီ့လက်တွေ လှုပ်ရှားလာတယ်။ ခုနက သင်းသင်းကို ထရပ်ကြတဲ့အချိန်က ချယ်ရီ အသက်အောင့်ပြီး ငြိမ်ငြိမ်လေး အိပ်ချင်ယောင် ဆောင်နေတာလေ။ သသင်းသင်းတို့အနားမှာ မရှိတော့မှ စောင်ခေါင်မြီးခြုံပြီး……….၊
အထဲကနေလှိုက်လှိုက်ပြီးယားနေတဲ့စောက်ဖုတ်ထဲ လက်သုံးချောင်းပူးထဲ့ပြီး အားနဲ့ခပ်သွက်သွက်လေး ညှောင့်ပလိုက်တယ်။ လူမသိအောင် ခိုးပြီးဖြေဖြေးလေး အထုတ်အသွင်းလုပ်ခဲ့ရတာဆိုတော့ ခုလို လူလစ်ချိန် အားနဲ့ အင်နဲ့ နှိုက်လိုက် အထုတ်အသွင်း လုပ်လိုက်ရတော့ ချယ်ရီတယောက် အရမ်းကောင်းသွားတယ်။ မျက်စိစုံမှိတ်ပြီး လုပ်ပလိုက်တယ်။ စောက်ဖုတ်ထဲက အရမ်းကောင်းလာတော့ ပါးစပ်က ညီးသံလေးတွေ ပွင့်ထွက်သွားတယ်။
ချယ်ရီတယောက် စောင်ကို ခေါင်းမြီးခြုံပြီး လောကကို ခဏမေ့သွားကာ သူတယောက်ထဲ ရှိနေသလို စိတ်ရှိလက်ရှိ စောက်ဖုတ်နှိုက်ပြီး ညီးလိုက်တဲ့အချိန်….သင်းသင်းနဲ့မာအမ်တို့က သူ့အနားပြန်ရောက်လာပြီ။ ဒါကို သတိမထားမိလောက်အောင် ချယ်ရီ ဖီးလ်တွေ တက်နေတာ။
အနားနားက ကပ်အော်လိုက်တဲ့သင်းသင်းအသံကြောင့် ချယ်ရီ တုန်သွားတယ်။ တဆက်ထဲမှာပဲ…ဖြတ်ကနဲ မီးခလုပ်ဖွင့်သံကြားလိုက်ရပြီး အခန်းထဲမှာလဲ လင်းသွားတယ်။
ဟာ…သွားပြီ သူဖြစ်ပျက်နေတာကို သင်းသင်းတို့မိသွားပြီပေါ့ ဆိုပြီး ချယ်ရီတယောက် ခေါင်းမြီးခြုံထဲကမထွက်ဘဲ ဒီအတိုင်း ငြိမ်ငြိမ်လေး ဆက်နေလိုက်တယ်။
သင်းသင်းတို့ကလဲ ရေချိုးခန်းထဲကနေ ထွက်လာတော့ ချယ်ရီတယောက်စောင်ခေါင်းမြီးခြုံပြီး တလှုပ်လှုပ်ဖြသ်နေတာတွေ့တာနဲ့ အသာလေး ခြေသံမကြားအောင် တိတ်တိတ်လေးလာခဲ့ကြတာ။ အနားရောက်မှ ချယ်ရီရဲ့ ကျိတ်ညီးသံလဲကြားရရော သင်းသင်းက မီးခလုပ်ကို ဖြတ်ကနဲဖွင့်ပြီး…ချယ်ရီ့အနားကပ်ပြောလိုက်တာလေ။
မာအမ်ကတော့ ရေခဲသေတ္တာထဲက ရေဗူးထုတ်ပြီး ရေသောက်နေတယ်။ သင်းသင်းက ခေါင်းမြီးခြုံထားတဲ့ ချယ်ရီ့စောင်ကို အတင်းဆွဲဖယ်နေတော့တယ်။
“လာဇမ်း ကောင်မလေး…အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်နေတာ…စောင်ခြုံထဲမှာ ဘာလုပ်နေလဲ….လာဇမ်း လာဇမ်း…”
“ဟာ…သင်းရယ်…မလုပ်ပါနဲ့….ငါ့ဟာငါ အိပ်ပရစေဟာ….အာ..ဘာလို့စောင်ကို တအားဆွဲခွာနေတာလဲ….မလုပ်နဲ့ဆို… ကောင်မနော်…
“စိတ်တိုတဲ့ ရုပ်လေး ကြည့်ချင်လို့ပါ…. လာဇမ်း စောင်ကိုဖယ်ပစ်မယ် လာဇမ်း…စိတ်တိုတဲ့ ရုပ်လေး ပြဇမ်း…ချယ်ရီမ….ဟင် လာထား”
ထမီရင်လျားကြီးနဲ့ စောင်ကိုအတင်းဆွဲခွာနေတဲ့ သူ့မိန်းမသင်းသင်နဲ့ စောင်ခြုံထဲကနေ စောင်ကို အတင်းပြန်ဆွဲနေတဲ့ ချယ်ရီတို့ကို မာအမ်ကတော့ ခပ်လှမ်းလှမ်းမှ ရပ်ကြည့်ပြီး ရယ်နေပါတော့တယ်။